Thwebula SopCast 4.2 – Vessoft
SopCast – a isofthiwe for ukulalela umculo ukubukela amavidiyo nobe iziteshi nge internet. Iziteshi Amaqembu software by imikhakha futhi likuvumela ukufaka ikheli ukubuka ividiyo oyifunayo. SopCast iqukethe module ukuthi kwenza abasebenzisi ababhalisile ukudala ishaneli yabo siqu ngenxa yokudlulisela video in the inethiwekhi. Isofthiwe likuvumela ukuba ufunde ulwazi olulandelayo mayelana siteshi: namandla signal, inani izivakashi, baqale kwesikhathi, uhlobo transmission, incazelo okuqukethwe njll Uma unezinkinga SopCast unikeza usizo okuningiliziwe itholakale FAQ kuthebhu, lapho izimpendulo zemibuzo ethandwayo akuphi.
Gcina ividiyo nethelevishini nge-internet
Ikhono ukudala ishaneli sakho siqu for video yokudlulisela in the inethiwekhi
Izimpendulo module zemibuzo athandwayo
Amazwana on SopCast:
SopCast Ahlobene software:
English, Afrikaans, Українська, Français... Open Broadcaster Software 17 futhi 0.659b